Ny Fondation Malgache en Environnement Tany Meva na Fondation Tany Meva dia niforona tamin’ny taona 1996 ary fehezin’ny lalàna momba ny tsanganasa fanasoavam-bahoaka eto Madagasikara (lalàna 95-028 nofoanana ka nosoloana ny lalàna 2004-014).
Miaro ny tontolo iainana
Ny Tany Meva dia nanomboka ny asany teo anivon'ny valan-javaboahary, izay manana harena voajanahary maro sy tsy fahita hatraiza hatraiza: Forêts des Septs Lacs, , Alan'Ankazomivady, Îles Radama, Valan-javaboahary Montagne d'Ambre, Valan-javaboahary Ranomafana, Valan-javaboahary Andasibe Mantadia, Valan-javaboahary Andohahela ... ka ny tanjona dia ny fampidirana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ho an'ny fitantanana maharitra, fiarovana sy / na fitandroana tsaratsara kokoa, ary koa ny fanomezan-danja ny harena voajanahary. Ny hevitra fototra dia: "Fitantanana maharitra ny loharanon-karena voajanahary ho amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina ".
Fivoarana haingan'ny fandraisan’anjaran’ny fikambanana mba hanasongadinana kokoa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny vondron’olona, amin'ny alalan'ny safidin-dohahevitra manokana:
• Fambolen-kazo tanterahan’ny vondon’olona,
• Fanatsarana ny tançn-dehibe "Tanàna Meva", ary
• Ady amin’ny doro tanety.
Omena laharam-pahamehana ireo hetsika fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena manome vahana ny tontolo iainana sy manatsara ny toe-piainan'ny vondron’olona.
Fomba fiasa amin'ny fandaharana miankina amin'ny lohahevitra
Hatramin'ny taona 2004, fandraisana anjara mba hahatrarana ny tanjona amin'ireo Fifanarahana telo (3) an'ny Firenena Mikambana (Karazan-javaboahary, fiovan'ny Toetrandro ary Ady amin'ny Fahamaintany), ary koa ny tanjon'ny Taonarivo ho an'ny Fampandrosoana.
Fandaharana miakina amin'ny lohahevitra dimy (5) no natomboka:
Fandaharan'asa Fambolen-kazo / fandrakofana ala "ALA MEVA"
Fandaharan'asa momba ny angovo ho an'ny tontolo iainana "ANGOVO MEVA"
Fitantanana maharitra ny harena voajanahary "DDRN"
Fanabeazana ampiharina momba ny tontolo iainana "EDENA"
Loka ho an'ny haivao momba ny tontolo iainana "TOSIKA MEVA"
Ny taona 2009 dia fiampitana nankany amin'ny Tetikasa Stratejika manaraka.
Miroso mankany amin’ny fampandrosoana maharitra ny vondrom-piarahamonina…
Ny Tany Meva dia namoaka ny Drafitra Stratejika 3 (2010-2014) izay mitondra ny teny filamatra vaovao: “Madagasikara, tany meva!”, nohon’ny ezaka nataon’ny vondrom-piarahamonina tonga saina, mahavita ary manolo-tena amin’ny fiarovana sy fitantanana maharitra ny tontolo iainany.
> Fanoloran-tena sy fanomezana andraikitra ny vondrom-piarahamonina
> Fanatonana ny vondrom-piarahamonina mba hanafainganana ny fampandrosoana
> Fiaraha-miombon'antoka maro amin’ny lafiny ara-tekinika sy ara-bola